यी हुन् हामीलाई हाई आउनुको कारण « Canada Nepal
यी हुन् हामीलाई हाई आउनुको कारण
अल्छि लागेको बेला होस् वा निन्द्रा आउन लाग्दा हामीलाइै हाई आउँछ । तर हाई किन आउँछ ? यसबारे धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ ।
हाई काढ्ने विषयका जिज्ञासा बारे कुनै तथ्य पत्ता लागेको छैन । वैज्ञानिकहरु समेत वर्षौदेखि यस बिषयमा अन्यौलमा छन् । हाई काढ्नुको खास कारण पत्ता नलागेको अवस्थामा केहि परिकल्पना मात्र सार्वजनिक भएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार अल्छि लाग्दा वा थकान हुँदा हाई आउँछ । रगतमा कार्बोनडाइअक्साईको मात्रा धेरै हुँदा र अक्सिजनको प्रवाह आवश्यक पर्दा हाई काढ्न मन लाग्छ । अर्को एक सिद्धान्त अनुसार हाई काढ्नु थकाई वा दिक्क (अल्छी) सँग सरोकारीत छैन । बरु दिमागको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने शरिरको एउटा तरिका मात्र हो ।
निन्द्राको अभाव र थकानले हाई गराए पनि हाई काढ्दा हामीलाई ‘ब्युताउन’ सहयोग पुर्याउदैन बरु हाम्रो दिमागलाई उचित तापक्रम कायम गर्न सहयोग पुयाउँछ ।
हाई काढ्दा फोक्सोबाट खराब श्वास हट्छ । तर, हाई काढदा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा भने खासै फाइदा पुर्याएको पाइदैन । यस्तै केहि विज्ञ भने दिमागमा इमोसन, मुड, भोक र अन्य गतिबिधिलाई असर गर्ने न्युरोट्रान्समिटर (रसायन) का कारण हाई आउँछ भन्ने ठान्दछन् ।
प्रकाशित मिति : जेठ ६, २०७९ शुक्रबार १० : ३८ बजे
पसिना गन्हाएर असहज भएको छ ? यी हुन् उपयोगी टिप्स
दाम्पत्य सफलताका लागि साना कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्
अनुहारमा आएको मासुको डल्ला कसरी हट्छ ?
बेलपत्रको कमाल कपाल झर्न रोक्नेदेखि छाला गोरो पार्नसम्म उपयोगी
खाली पेटमा ४ गिलास मन तातो पानी पिउँ, स्वस्थ्य जीवन जिउँ
फर्सीको मुण्टा खाँदा स्वास्थ्यमा लाभैलाभ
दही, केरा र अमिला फलफूलका साथै चिया कफी पनि खाली पेटमा खानु हुदैँन